အစာရှောင်ဆုတောင်းမည့်အင်္ဂါနေ့အကြောင်းမှတ်စုများ | Notes on Our Fast-Day on Tuesday | Real Conversion
ဩဂုတ်လ ( ၁၂ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကို ခံရကြ၏။ သင်သည် အစာရှောင်သောအခါ အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့ မှာ မထင်ရှားစေဘဲ၊ မထင်ရှားသောအရပ်၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အ ဘရှေ့တော်၌သာ ထင်ရှားစေခြင်းဌါ၊ ခေါင်းကိုလိမ်းကြံလော့။ မျက်နှာ ကိုလည်းသစ်လော့။ မထင်ရှားသောအရာကို မြင်တော်မူသော သင်တို့ အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာ ပေးတော်မူလတံ့။” ( မဿဲ ၆း ၁၇၊ ၁၈ )
ယေရှုက “သင်တို့သည် အစာရှောင်လျှင်” ဟု မိန့်တော် မမူ ပါ။ လုံးဝမပြောပါ။ “သင် တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ” ဟု သာမိန့်တော်မူသည်။ လောကလူသားတွေအ တွက်ဆိုလျှင် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည်ဟူသောအချက်မှာ သူစိမ်းဆန်လွန်းသည်။ တခါတ ရံ အစိုးရိမ်လွန်သည့်မိခင်များက အစာမစားဘဲ တစ်ရက်နေလျှင် သေဖို့အစာရှောင်သည်ဟု ထင်မှတ်နေလိမ့်မည်။ သင့်အမေကို မုသားမဆိုပါနှင့်။ သင်သည် အစာမစားရုံပါဘဲဟု ပြော လိုက်ပါ။
လူတိုင်းသည် အစာရှောင်ဆုတောင်းရန် မသင့်တော်ပါ။ သင့်အသက်တာတွင် ကိုယ် ကာယ ပြဿနာရှိနေလျှင် သင်သည် အစာမရှောင်မှီ ဆရာဝန်နှင့်ပြသင့်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့အသင်းတော်တွင် သင်သည် Judith Cagan သို့မဟုတ် Kreighton L. Chan တို့နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဖုန်းနှင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Judith Cagan ၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ ( ၂၁၃ ) ၃၂၄-၃၂၃၁ ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Chan ၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ ( ၃၂၃ ) ၈၁၉-၅၁၅၃ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သွေးတိုးရောဂါ၊ သို့မဟုတ် ဆီးချို၊ သို့မဟုတ် တစ် ခုခုဖြစ်နေလျှင် ဒေါက်တာ Judith Cagan သို့မဟုတ် ဒေါက်တာ Chan တို့ကိုခေါ်ပါ။ သို့မ ဟုတ် အစီအစဉ်အပြီးတွင် သူတို့တစ်ဦးဦးနှင့်စကားပြောပါ။ သူတို့က အစာမရှောင်ရန် အကြံ ပေးကြလျှင် အင်္ဂါနေ့အစာရှောင်ဆုတောင်းချိန်တွင် ဆုတောင်းခြင်း၌ အချိန်များစွာကို အသုံး ပြုရပါမည်။ သင်သည် ထိုနေ့တွင် အစာမရှောင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ဆုတောင်းနိုင်ပါ သည်။
ကြဂုတ် ၁၄၊ အင်္ဂါနေ့တွင် အသင်းတော်၌ အစာရှောင်ဆုတောင်း တစ်ရက်ရှိပါမည်။ သင်တို့တွင် မည်သူမျှ အစာရှောင်ရန် မလုိပါ။ သင်တို့အစာရှောင်သည်ကို အဘယ်သူမျှ စစ် ဆေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ အစာရှောင်ဆုတောင်းလျှင် ကိုယ့်စိတ်အလိုအ တိုင်းပဲဖြစ်ပါစေသော်။ သင်တို့ဆန္ဒရှိလျှင် လုပ်ဆောင်ပါ။ သင်တို့တွင် ဆန္ဒမရှိလျှင် မလုပ်ပါ နှင့်။
လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာတွင် ဤတစ်ကြိမ်သည် ပထမအကြိမ် အစာရှောင်ဆု တောင်းဖို့ဖြစ်ပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းလိုအပ်သည်အကြောင်းကို Liberty University တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာ Elmer L. Towns သတိပေးက သတိပေးထားသည်။ ဤတရားဒေသနာတွင် ကျွန်တော်ပေးလိုသော အတွေးအခေါ်နှင့်မှတ်ချက်စကားကို ဒေါက် တာ Towns ၏စာအုပ်ဖြစ်သည့် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအစပြုသူတို့အတွက်လမ်းညွှန်၊ Bethany House Publishers၊ ၂၀၀၁ ထဲမှ ကောက်နှုတ်ထားသည်။ ကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ် အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်အုပ်လိုချင်လျှင် Amazon.com တွင် တစ်အုပ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာ Towns ၏စာအုပ်ထဲတွင် အစာရှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော် “Yom Kippur အစာရှောင်ခြင်း” ဟု အမည်တွင်သည့် တစ်ရက်သာအစာရှောင်ခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ကြမည်။ ဤတစ်ရက်တာအစာရှောင်ခြင်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် ယုဒလူမျိုး များကို တောင်းဆိုထားပါသည်။ ( ဝတ်ပြု ၁၆း ၂၉ )
ယနေ့တွင် ခရစ်ယာန်များအား အစာရှောင်ဆုတောင်းရန် မတောင်းဆိုပါ။ သို့ရာတွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ယေရှုက “သင်တို့သည် အစာရှောင်သောအခါ” ( မဿဲ ၆း ၁၆ ) ဟု မိန့်တော်မူရာတွင် အစာရှောင်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား နှင့်ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။
သင်သည် တကြိမ်တခါမှ ဆုတောင်းဖူးခြင်းမရှိလျှင် အစာမစားဘဲ တစ်ရက်တာနေ ခြင်းသည် သင့်အား ဒုက္ခရောက်စေမည်ဟု ထင်နိုင်သည်။ သို့သော် အစာရှောင်ဆုတောင်း ခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ကျစေခြင်းမှတပါး ဘာနာကျင်မှုမျှ မပေးပါ။ တစ်နေ့သာ အစာ ရှောင်ခြင်းက ဒေါက်တာ Judith Cagan သို့မဟုတ် ဒေါက်တာ Chan ကဲ့သို့သော ဆရာဝန် များက “အဆင်ပြေပါတယ်”ဟု ထောက်ခံသောပုံမှန်လူတစ်ဦးအနေဖြင့် နာကျင်မှုမရှိပါ။
တစ်နေ့တာ “Yom Kippur အစာရှောင်ခြင်း” သည် အင်္ဂါနေ့အစာရှောင်ဆုတောင်း ရာတွင် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့ကို အစာရှောင်ဆု တောင်းရန် မတောင်းဆိုပါ။ ဝိညာဉ်ရေးရာစည်းကမ်းအနေဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်လုပ်ဆောင်ထား ခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်အတွက် မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ အကြောင်း မှာ သင်တို့၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်သင့်ကြားက ဆက်ကပ်အပ်နှံ ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းက ဘုရားသခင်အတွက် ဆုတောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
သင်တို့သည် အင်္ဂါနေ့၌ အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ တည်ရှိခြင်းကို မျှော်လင့်ပါ။ နတ်ဆိုးသည် သင်တို့ကို ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အခြားသူများ သို့မဟုတ် အသင်း တော်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းလျှင် စာတန်သည် သင်တို့ကို ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည် လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အစာရှောင်ဆု တောင်းခြင်းအတွက် စွန့်စားမှုတစ်ခုကို ပြုသောအခါ တို့ထိသောအသိဥာဏ်အားဖြင့် လုပ် ဆောင်ပါ။ သို့ရာတွင် အကျိုးသည် အလွန်ကြီးပါသည်။
တရက်သာ Yom Kippur အစာရှောင်ခြင်းကိုပြုခြင်းသည် နေဝင်သည့်အချိန်မှစ၍ နောက်နေ့ နေဝင်သည့်အချိန်အထိပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ တစ်ရက် သာအစာရှောင်ဆုတောင်းလျှင် နေမဝင်ခင် အဆာပြေစားသင့်ပါသည်။ ( ည ၈း၃၀ အချိန်၌ ) ငှက်ပျောသီး သို့မဟုတ် ကောက်ပဲသီးနှံများကို စားသုံးပါ။ နောက်နေ့တွင် နံနက်စာ သို့မဟုတ် နေ့လည်စာ မစားပါနှင့်။ အင်္ဂါနေ့ နေဝင်သောအခါ အသင်းတော်၌ အတူတကွ စားသုံးကြပါ မည်။ အခြားသောဌက်ပျောသီးကိုလည်း ဘုရားကျောင်းမလာမှီ အင်္ဂါနေ့ ည ၇း၀၀ နာရီ လောက်တွင် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည် ဤနေရာသို့ရောက်ကြသောအခါ ရေအချို့ နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တို့ကို စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့သည် အနည်းငယ် ထပ်ဆုတောင်းကြပါမည်။ တစ်နေ့သာ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအတွက် သက်သေ ခံစရာများရှိလျှင် သက်သေခံဖို့ အချိန်ကောင်းပေးပါမည်။ တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြင့် ကျွန်တော် တရားဟောပါမည်။
သင်တို့သည် အင်္ဂါနေ့တွင် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းကိုပြုကြသောအခါ ရည် ရွယ်ချက် ထားသင့်ပါသည်။ ဤအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက္မှာ စနေနေ့ညနေ တွင်ပြုလုပ်မည့် ဂိမ်းတွင် အခြားသူများကို အသင်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ရန် အသင်း တော်ရှိလူများအတွက် ဆုတောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဂိမ်းကို အသုံးမပြုလျှင် အ ဘယ်သူမျှ ဘုရားကျောင်းသို့လာကြမည်မဟုတ်။ ဂိမ်းသည်လည်း အခြားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု သက်သက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အသင်းတော်၏ “စက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။” အသီးမ သီးသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်မည်။ ရှေ့လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အမျိုးသမီး များပြုလုပ်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေအတွက်လည်း အစာရှောင်ဆုတောင်းကြပေမည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးများဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားများဖြစ်စေ ဘုရားသခင်က ဂိမ်းအားဖြင့် အသင်း တော်သို့လူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆုတောင်းကြဖို့ တောင်းဆိုလိုပါသည်။ သင်တို့သည် အခြားသောအရာများအတွက်ဆုတောင်းနိုင်ကြပေမည်။ သို့သော် ဤအစာ ရှောင်ဆုတောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသင်းတော်၌ အခြားလူငယ်အသစ်များကို ပို့ ဆောင်ရာတွင် ဘုရားသခင်က ဂိမ်းကို အသုံးပြုရန် အဓိကထားဆုတောင်းကြမည်။ သင်၏ဆု တောင်းခြင်းသည် ထိုအရာပေါ်အဓိက ဦးတည်နိုင်ရန် ဆုတောင်းရပေမည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် တနင်္ဂနွေအစီအစဉ်တွင် အခြားသူများကိုပို့ဆောင်ဖို့ ဂိမ်းကိုအသုံးပြုရန်အ တွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် အစာရှောင်ဆုတောင်းပါ။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အ တွက် အမျိုးသမီးများ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ဆုတောင်းမည့်သူ လိုအပ်ပါသည်။
သင်တို့၏ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် အဆာပြော အ နည်းငယ်စားခြင်းဖြင့် အစာပြုပြီး အင်္ဂါနေ့တွင် နံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာကို ရှောင်ရပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင် အဆာပြေထပ်စားပါ။ ပြီးတော့ အင်္ဂါည ၇း ၀၀ နာရီချိန်တွင် ဘုရားကျောင်းသို့ လာပါ။ အတူတကွ ထမင်းစားကြပါမည်။
“သင်တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောအခါ”… ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုသည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ထောက်ခံပေးသည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏လမ်းပြခြင်းနှင့်တန်ခိုးတော်ကိုရရှိဖို့အတွက် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ John R. Rice က “စစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်းကိုသိရှိသည်၊ …ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ရရှိကြလိမ့်မည်” ဟု ဆိုသည်။ Spurgeon က “အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို လက်လျှော့ကြသဖြင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ၌ ကြီးမားသည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခု ဆုံးရှုံးကြရသည်” ဟု ဆိုသည်။ ဒေါက်တာ R. A. Torrey “ကျွန်တော်တို့သည် တန်ခိုးဖြင့်ဆုတောင်းကြလျှင်၊ အစာရှောင်သင့်သည်” ဟုဆိုပါ သည်။ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး John Wesley က “သင်တို့တွင် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်း တို့ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသလား၊ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်…နှင့်ကရုဏာတော်ပလ္လင်တို့သည် ဆင်း သက်လာကြပေလိမ့်မည်” ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်ရဲ့ တရုတ်သင်းအုပ်ဆရာတော် ဒေါက် တာ Timothy Lin က “ကျွန်တော်တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာသတိရှိခြင်းကို အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆု တောင်းခြင်းစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ဆီးတားခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ် တွေ့ကနေပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤတရားဒေသနာစာမူကို ကိုယ်နှင့်အတူ အိမ်သို့ယူဆောင်ပါ။ သင်သည် ညနေ အဆာပြေနှင့်အတူ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်၍ မနက်ဖြန်၌ ဤတရားဒေသနာကို ဖတ်ရှုပါ။ သင်တို့သည် တနင်္လာညနေမှစ၍ အင်္ဂါညနေပိုင်းအထိ အစာ ရှောင်ကြသောအခါ သတိပြုရမည့်အချက်အချို့ရှိပါသည်။
၁. တိတ်ဆိတ်စွာဆုတောင်းပါ။ ( အဖြစ်နိုင်ဆုံး ) သင်သည် အစာရှောင်ဆု တောင်းသည်ကို သူတပါးအား ပြောပြရန် လျှောက်မသွားပါနှင့်။
၂။ အင်္ဂါနေ့ အစာရှောင်နေစဉ် ဟေရှာယ ၅၈း ၆ ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပါ။
“ငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသော အချည်း အနှောင်ကိုချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှင်းဆဲခံရသော သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော့။ ( ဟေ ရှာယ ၅၈း ၆ )
၃။ သင်သည် အင်္ဂါနေ့တွင် အစာရှောင်လျှင် မဿဲ ၇း ၇-၁၁ ကို ကြိမ်ဖန်များ စွာဖတ်ပါ။
“တောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရမည်။ ရှာကြလော့။ရှာလျှင် တွေ့ မည်။ တံခါးကိုခေါက်ကြလော့။ ခေါက်လျှင်ဖွင့်မည်။ တောင်းသော သူမည်သည်ကားရ၏။ ရှာသောသူလည်းတွေ့၏။ ခေါက်သောသူ အားလည်း တံခါးကိုဖွင့်၏။ သားသည် မုန့်ကိုတောင်းလျှင် မိမိ သားအား ကျောက်ကိုပေးမည့်သူ၊ ငါးကိုတောင်းလျှင် မုန့်ကို ပေး မည့်သူ တစုံတယောက်မျှ သင်တို့တွင်ရှိသလော။ သင်တို့သည် အဆိုးဖြစ်လျက်ပင် ကိုယ်သားတို့အား ကောင်းသောအရာကို ပေး တတ်လျှင်၊ ထိုမျှမက ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အ ဘသည် ဆုတောင်းသောသူတို့အား ကောင်းသောအရာကို သာ၍ ပေးတော်မူမည်။” ( မဿဲ ၇း ၇-၁၁ )
၄. ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ပါးစကစ်ဘောပွဲတွင် လူ ငယ်များစွာကို ခေါ်ဆော်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့လူတို့အတွက် ဆုတောင်းပါ။
၅။ ရေများများသောက်ပါ။ နှစ်နာရီတွင် ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စီ ပုံမှန်သောက်ပါ။ နေ့တိုင်းသောက်နေကျဆိုလျှင် ကော်ဖီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည် အနက်ကို ( သကြား သို့မဟုတ် ခရမ် မပါသော )) ကိုလည်း သောက်ပါ။ “ကောင်းပေါ့ပါးလျှင်”၊ စပါးရိုက်အေး သို့မဟုတ် ဆယ်ဗင်းအပ် ( တစ် ခွက် သို့မဟုတ် နှစ်ခွက် ) ကို သောက်နိုင်ပါသည်။ ပါဝါလုံးဝမသောက် ပါနှင့်။
၆။ သွေးတိုး သို့မဟုတ် ဆီချိုကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးအတွက် မေးမြန်းစရာ များရှိလျှင် ဒေါက်တာ Judith Cagan သို့မဟုတ် ဒေါက်တာ Kreighton Chan တို့ကို အစာမရှောင် မှီ မေးမြန်းပါ။ သူတို့ဖုန်းနံပါတ်များကို တရား ဒေသနာမတိုင်မှီက ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
၇။ သင်သည် တနင်္လာနေ့ညနေ အစာစားပြီးနောက်မှစ၍ အစာရှောင် စာ တင်ပါ။ အင်္ဂနေ့ ညနေ အစာစားသည့်အချိန် အဆုံးသတ်ပါ။ ထို့နောက် အင်္ဂါ ညနေ ၇း၀၀ တွင် ညစာ စားဖို့ ဘုရားကျောင်းသို့လာပါ။
၈။ အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ ကျွန်တော်တို့လူကြီးများက လာမည့် စနေနေ့ ပါးစကစ်ဘောအချိန်တွင် လူများစွာကို ခေါ်ဆောင်လာရန် အဓိက ထားရန် ဆုတောင်းပါ။
သင်တို့သည် ပြဿနာ၊ သို့မဟုတ် မေးစရာမေးခွန်းရှိလျှင် ကျွန်ုပ်၊ ဒေါက်တာ Hymers, တို့ကို ( ၈၁၈ ) ၃၅၂-၀၄၅၂ ဖြင့် အချိန်တိုင်း ဖုန်းခေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မစ္စ Hymers ၏ဖုန်းနံ ပါတ် (၈၁၈)၆၄၅-၇၃၅၆ ကိုခေါ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့လည်း ပြောနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အောင်မြင်သည့်အချိန် ကာလတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ နောက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ သင် သည် အိမ် သို့မဟုတ် ကျောင်း၌ အင်္ဂါနေ့တွင် အလုပ်လုပ်နေလျှင် ဤသို့သောတောင်းဆို ချက်များအတွက် အချိန်တိုင်း တိတ်ဆိတ်စွာ ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ။ ဤတရားဒေသနာကို သင်နှင့်အတူ အမြဲရှိစေပါ။ သို့ဖြင့် ( အထက်ပါ ) အချက်ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန် သတိရနိုင်ပါ သည်။ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
ဒေါက်တာ R. L. Hymers, Jr.
ဖိလိပိ ၄း ၁၃
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းနံပတ် ၄၊ “ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ” သီချင်းကို သီဆိုကြ ပါစို့။
ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ၊ သခင်၊ ဆုတောင်းရန် အကျွန်ုပ်ကိုသွန်သင်ပေးပါ။ တနေ့ပြီး တနေ့ ကျွန်ုပ်နှလုံးသားငိုကြွေးနေသည်။
အလိုတော်နှင့်ပြရန်လမ်းကိုသိလိုပါသည်၊ ဆုတောင်းရန်သွန်သင်ပေးပါ၊ သခင်၊ ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ။
ဆုတောင်းခြင်း၌တန်ခိုးတော်၊ သခင်၊ ဆုတောင်းခြင်း၌တန်ခိုးတော်၊ တန်ခိုးတော် အကျွန်ုပ် အားပေးပါ၊ ဆုတောင်းခြင်း၌တန်ခိုးတော်၊
လူသည် ပျောက်ဆုံးလျက် သေဆုံးသည်၊ ဝိညာဉ်များပျက်စီးသည်၊ တန်ခိုးတော် အကျွန်ုပ်ကို ပေးပါ၊ ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုးတော်။
ဆုတောင်းရန်သွန်သင်ပေးပါ၊ သခင်၊ ဆုတောင်းရန် အကျွန်ုပ်ကို သွန်သင်ပေးပါ၊ တနေ့ပြီး တနေ့ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ဦးတည်ရာ၊
ကျွန်ုပ်၏သေချာခြင်း၊ ယခုမှစ၍ ထာဝရတိုင်၊ ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ် ကို ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ။
( “ဆုတောင်းရန် သွန်သင်ပေးပါ၊” Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆ )
“ဆုတောင်းရန်သင်ပေးပါ၊” ၊ (Albert S. Reitz,၁၈၇၉-၁၉၆၆ ရေးစပ်သည်။ )